Odayaasha magaalada ugu khala-laasaha badan Soomaaliya oo kahor yimid go’aan madaxwayne [Akhriso] – Radio Daljir
Odayaasha magaalada ugu khala-laasaha badan Soomaaliya oo kahor yimid go’aan madaxwayne [Akhriso]
Janaayo 20, 2018 5:47 b 0
Odayaasha magaalada Muqdisho ayaa soo saaray qoraal ay kaga soo horjeesteen go’aankii madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku mamnuucay in la iibiyo ama la wareejiyo dhulka oo ka mid ah hantida qaranka uu leeyahay.
“Iyada oo la ilaalinayo hantida qaranka ee dhul, cir iyo bad waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in wixii dhul ah ee la iibiyay ama la hibeeyay ama la kireeyay keddib 8-dii Febraayo, 2017 uusan haysan ogolaansho sharci ah. Haddii uu jiro muwaadiniin iibsaday ama kireystay dhul danta guud, waxaan u sheegayaa in iibsigaas uu yahay mid sharci darro ah.”ayuu sheegay madaxwayne Farmaajo todobaadkii hore.
Odayaasha ayaa qoraal ay soo saareen waxaa ay ku sheegeen inay tahay mid aanay u cuntamin go’aanka madaxwaynaha Soomaaliya kasoo baxay, waxaana dhanka kalle ay sheegeen inay taageersanyihiin dhulka inuu bixiyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, arrinta kalle ay qoraalka ku sheegeen ayaa waxaa ka mid ah inay soo dhoweynayaan shirka aaya katashiga gobolka Banaadir.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka ayaan horay looga baran odayaashu inay ka hadlaan danta guud, waana magaalada ugu dhibaatada badan ee Soomaaliya oo aan marna odayaasheedu waxba ka dhihin sidii xal loogu heli lahaa, balse waxaa muuqanaysa beryihii lasoo dhaafay shirarka odayaashu ay dowladda ay kaga sheeganayaan magaalada Muqdisho.
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Koonfur Afrika, kadibna hantidiisa la boobay
Madaxwaynaha dowladda faderaalka Farmaajo oo kusii jeeda Caabudwaaq